जिउदो श्रीमानलाई मारेर सिन्दुर पखाल्न आदेश दिने अधिकार आयोगलाई कस्ले दियो? « Postpati – News For All
जिउदो श्रीमानलाई मारेर सिन्दुर पखाल्न आदेश दिने अधिकार आयोगलाई कस्ले दियो?
‘वेपत्ताको परिभाषा मृत्यु’ कुन अक्सफोर्डमा छ?
आयोगले ४ सय भन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पिडित परिवारजनलाई पत्र पठाएको छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगले मिति २०७४।०५।१६ गते को निर्णय अनुसार मिति २०७४।०६।०२ गते पीडितहरुलाई पत्र काटेको छ । केही पिडितहरुले मंसिर महिनामा नै सत्य आयोगमा पठाएको जानाकारी पत्र प्राप्त गरे पनि धेरै पिडितहरुले अहिले सम्म पत्र प्राप्त गरेका छैनन् ।
पत्र प्राप्त नगर्ने पिडितहरुलाई अहिले सम्म थाहा छैन उनीहरुले वेपत्ता आयोगमा दिएको उजुरी कहाँ छ ? र के हुदै छ ?
अन्तिम घडिमा आएर आयोगले सत्य आयोगमा पठाएको उजुरीको मुख्य उद्देश्य भनेकै पिडितको पीडा एवं न्यायप्रति आयोग संबेदनशील नहुनु हो । साथै यस कार्यले वेपत्ता आयोग पीडित प्रति र पीडितको मनोसामाजिक पक्ष प्रति सम्वेदनशिल छैन भन्ने पनि प्रमाणीत भएको छ ।
यदि आयोग साच्चीकै सम्वेदनशिल थियो भने यो विषयका बारेमा पीडित तथा पीडित संस्थाहरुसँग किन कहिल्यै छलफल गर्न सकेन ?
आफ्नो जिन्दगीको लामो समय नियमीत अदालती प्रकृयामा गुजारेका द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाका लागि उपयुक्त नहुने पनि यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ ।
अब यी निर्जिवतूल्य आयोगहरुबाट पिडितले न्याय प्राप्त गर्ने वा सत्यको उजागर हुन्छ भन्ने आश गर्नु परिवारहरुको मुर्खता पो हुने देखियो । अब परिवारहरुले न्यायको लागि नयाँ बाटो खोज्न पर्ने जरुरी देखिन्छ । आफुलाई दिएको अधिकार क्षेत्र भित्रबाट काम गर्ने भन्दा पनि काम गर्ने ऐन छैन भन्दै गर्न सकिने काम समेत नगरि पिडितको नाम भजाएर ३ वर्ष विताउने आयोग आफैले निरिहपन देखाएका छन् ।
(गिता रसाईली द्वन्द्वपडित साझा चौतारीकि उपाध्यक्ष हुन् )